प्रकाश र आँचलको ‘यो माया हो कि विछोड’ ? (भिडियो) « Ramailo छ
प्रकाश र आँचलको ‘यो माया हो कि विछोड’ ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Feb 19, 2021
प्रकाश सपुत र आँचल शर्माले अभिनय गरेको ‘यो माया हो कि विछोड’ बोलको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । सरोज वलीको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा प्रकाश र आँचलबिच प्रेम अनि विछोडलाई प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियो :
रिमेश कुमारको संगीत रहेको गीतमा रचना रिमाल र रोमन प्रकाशले स्वर दिएका छन् । शब्द उत्तम विचारले तयार गरेका हुन् । विक्रम स्वाँरको कन्सेप्ट र कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई मुस्ताङमा खिचिएको हो । छायाँकन नवराज उप्रेतीले गरेका हुन् ।